11 Wiilal Anime Ah Oo Xiiso Leh Kuwa Soo Geliya - Kale
14+ Wiilal Anime Ah Oo Xiiso Leh Kuwa Soo Geliya
Markaad daawato Anime waxaa marwalba wanaagsan inaad hesho dabeecad aad laxiriiri karto. Markaad la xiriiri karto, Anime wuxuu noqdaa mid lagu raaxeysto.
Intaas oo kaliya maahan, wey kuu fududeyneysaa in xiriir la sameeyo barnaamijka aad daawaneysid. Taas ayaa kaa sii dhigaysa shucuur ahaan ku lug leh.
Tusaalahan, sida qarsoodiga ah, jilayaasha Intime ee loo yaqaan 'Anime' ayaa fududaan doonta in lala xiriiro marka loo eego dib u rogista
Ama xitaa xiiso badan siyaabaha qaarkood. Mararka qaar.
Aan u nimaadno.
Wiilasha Anime ee ugu Fiican:
Qof kastaa wuu garanayaa wejigiisa. Yar waa dabeecad weyn oo ka mid ah taxanaha ugu caansan - Dragon Ball Z.
Isagu waa mid masaafadiisa ilaaliya oo meel fog ka fiirsada. Aniga oo doorbidaya inuu helo booskiisa waqti badan halkii uu ka ahaan lahaa dad fara badan markasta.
Isagu waa mid ka mid ah jilayaasha ugu hooseeya ee caqliga iyo waxqabadka leh ee DBZ.
2. Byakuya Kuchiki (Bilic)
Mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan Naftu waxay ka gurataa Biliij .
Byakuya had iyo jeer waa qabow, deggan oo la ururiyey. Weligaa ha lumin qabowgiisa. Oo waxaa badanaa laga helaa isaga oo samaynaya wax kasta oo ay tahay inuu u baahan yahay inuu sameeyo.
Dabeecaddiisa madax-bannaan darteed, wuu adkaan karaa. Ka dhigista mid aan u badnayn inuu isagu weydiisto caawimaad.
Taas markii la yidhi, isagu waa nooca Introvert ee haya saaxiibo yar oo saaxiibo ah. Halkii aad ka heli lahayd saaxiibo aad u tiro badan.
3. Alphonse Elric (Albaayiste Fullmetal)
Laga soo bilaabo bandhigii caanka ahaa - Buufiska Birta Buuxa .
Alphonse waa walaalka ka yar Edward Elric. Yaa ka soo horjeedkiisa dhammaystiran.
Alphonse waa mid naxariis badan, fahamsan, badiyaa deggan oo fikir leh. Had iyo jeerna wuu hadlaa markuu haysto wax laxiriira inuu dhaho, iyadoo lid ku ah kaliya hadalka aawadiis.
Inuyasha walaalkiis ka weyn, Sesshomaru waa nooca xasilloon. Marna nooca ereyadiisa lumiya, dad badana way awoodaan inay isaga ugu soo dhowaadaan.
Laakiin kuwa sameeya, isagu wuu ka daryeel badan yahay iyaga inta aad ka filan lahayd. Maaddaama Sesshomaru uu yahay nooca carqaladaynta, dhifna u muujiya dhinaca daryeelkiisa.
5. Khamsin (Shakugan No Shana)
Shakugan Maya Shana waa Anime Khamsin ayaa ka muuqda.
Isagu waa fekeraa, weligiis ma hadlo isagoon marka hore ka fikirin. Waxaa la doortaa in laga fogeeyo in la isku soo dhowaado. Laakiin runti wuu qadarinayaa xiriir kasta oo uu la yeesho dadka uu ku dhow yahay.
Nin ereyo aan badnayn laakiin ka naxariis badan astaamo badan oo is barbar dhig ah.
6. Ryner Lute (Halyeeyga Halyeeyada Halyeeyada ah)
Ryner waxay umuuqataa mid laga rogayo waqtiyada qaar, laakiin runti isagu waa xiriiriye weyn. Taas oo kugu khiyaanaynaysa inaad aaminto inuusan ahayn qof soo-galooti ah.
Wuxuu jecel yahay inuu waxbadan qoslo, seexdo, hurdo seexdo, waana mid ka mid ah jilayaasha Anime ee halkaas dib loogu dhigay.
7. Gajeel Redfox (Sheeko Gaaban)
Saddexda midkood jiilkii ugu horreeyay ee Dragon Slayers ka socota Fairy Tail.
Gajeel waa nooca kaligiis qaboojiyo, dib u laado oo nasiyo. Oo wuxuu jecel yahay inuu la dagaallamo barbaarintiisa iyo waayo-aragnimadiisa nololeed awgeed.
Isagu waa nooca qofka ay ku adag tahay inuu u dhowaado dadka kale, taas oo ka dhigaysa sida ay kuwa kale ugu adag tahay inay diiriyaan shakhsiyaddiisa.
Lowska adag ee ah in la jajabiyo sida hubkiisa birta ah, taas oo ka dhigaysa shakhsiyadiisa iyo kartidiisa wax lagu qoslo.
8. Zelgadis Graywords (Dilayaal)
Laga soo bilaabo taxanaha dugsiga hore - Dilayaal!
Zelgadis waa mufakir macquul ah, dib u dhigay oo waqti badan culus.
Wuxuu doorbidayaa inuu wax qabto oo uu ficil sameeyo, marka loo eego madadaalo iyo waqti ku qaadashada sheekada qiiqa. Laakiin markii ay tahay waqtigii madadaalo uma qaato si sahal ah!
Khuseeya: Liiska Ugu Dambeeya ee Erey Gowracayaasha ee Kugu Soo Celin Doona!
9. Kokonotsu Shikada (Dagashi Kashi)
Kokonotsu waa mid ka mid ah dabeecadaha hogaaminaya laga bilaabo Dagashi Kashi Anime ee 2016.
Isagu waa yar yara caajis yahay, dib buu u jiifay, af badan yahay, oo cirraysan yahay. Waa tan ka soo horjeedda shakhsiyadiisa taas oo ka dhigaysa anime yar oo duurjoog ah (sababtoo ah gabadha kale ee jilayaasha ah).
10. Nozaki Umetarou (Gabdhaha Billaha ah Nozaki Kun)
Laga soo bilaabo taxanaha majaajilada - Nozaki Kun. Waa mangaka oo qarash gareeya wax badan ee waqtigiisa abuurista manga.
Nozaki dib baa loo dhigay waad rumaysan weyday. Oo sidaas baa dabacsan oo maqane ah. Ilaa heer laga careysiinayo Chiyo Sakura yaa dhacay Nozaki.
Wuxuu kudarsadaa qosol layaableh anime-ka la siiyay shakhsiyadiisa.
La xiriira: Gabdhahan Billaha ah ee Nozaki Kun waxay soo celinayaan xusuus!
11. Yukiteru Amano (Mirai Nikki)
Bulsho xumo, xishood, cabsi. Mararka qaarkood kalsooni la'aan.
Erayadan waxay qeexayaan Yuki Amano oo ka soo jeeda taxanaha Anime - Xusuus-qorka Mustaqbalka.
Siyaabaha qaarkood isaga ayaa ugu dabeecad liistada liiskan. Hormarintiisa dabeecadeed ee taxanaha oo dhan waa mid ka mid ah kuwa ugu yaabka badan sidoo kale.
La xiriira: 11 Bulsho Wacan Haddana Jilaayad Anime Ah
Sasuke Uchiha, si la mid ah walaalkiis Itachi Uchiha waa soo-dejiye. Iskuday khibradiisa iyo marar dhif ah oo lala wadaago cid kale.
Sasuke gadaashiisa waa bahalnimo iyo nolol ilmo cidlo ah ku nool oo aan cidina dhag jalaq u siin. Xitaa aabihiis ma ahan. Taasi waa sababta Sasuke u sameyso dadaal si uu u helo ammaanta aabihiis si loo ogaado.
Qaabka caadiga ah ee is-dhexgalka bulshada, wuxuu ilaaliyaa masaafadiisa oo dadka ayuu miisaamaa. Oo waxay qaadataa waqti in la sameeyo Sasuke furitaanka.
Khuseeya: 8 Sababood oo aan u Dareemo Naruto Shippuden RUINED Taxanaha Naruto
13. Naofumi Iwatani (Geesi Gaashaan)
Naofumi Iwatani s xiddigga ugu weyn ee bandhigga ee Shield Hero. Muddo yar ka horna waa dhibbane, oo lagu calaamadeeyay a dambiile eedeyn kufsi been abuur ah.
Horay ayaa loo dhexgalay (isagu waa Otaku Kahor sheekada weyn), laakiin nolosha oo ku qasab ah in garbaha laga ilaaliyo
Cidna kuma kalsoona, koofiyaddu maxay tahay sababta xiriirka - Raphtalia, dabeecad kale oo muhiim ah ayaa ka dhigaysa anime-kan mid gaar ah.
Waxay u egyihiin sidii galoofad.
Hachiman Hikigaya waa qarsoodi cad Nooca aan rabin inuu dhibsado si aan loo baahnayn. Oo waxaan door bidi lahaa in keligaa la daayo haddii la caawin karo.
Maaha inuu awoodi kari waayey inuu bulshada dhexgalo, ee kaliya wuxuu doonayaa inuu dhexgalo oo uu saaxiibo la yeesho dhab ah dadka uu aamini karo.
Wax dan ah kama lahan cilaaqaadka beenta ah ama dhoolla caddeynta beenta ah si uu nabadda u sameeyo.
Hachiman waa mid ka mid ah Isbarashada ugu weyn ee aan ku soo arkay warshadaha anime.
10 Gabdho Anime Ah Oo Xiiso Leh
Maxay Tahay Sababta Taageerayaashu U Qarsadaan Xiisaha Ay U Leeyihiin Dadka Kale
top 10 anime ugu weyn waqtiga oo dhan
Haddii Aad Dooneyso Inaad Ogaato Sababta Ay Dadku U Jecel Yihiin Anime, Halkan Waa Jawaabtu!
Yaad ku dari laheyd liiskan? Ka tag faallooyinkaaga!